Villa Soomaaliya Oo Aqbashay Banaanbaxa Mucaaradka – Goobjoog News
War ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu fasaxay banaanbaxa Sabtiga ee ay qabanayaan Musharixiinta Mucaaradka.
Dowladda ayaa horay dhowr jeer u diiday in uu dhaco banaanbaxa ay soo abaabuleen Midawga Musharixiinta .
Ugu danbeyn Villa Soomaliya ayaa Aqbashay Isusoobaxa Looga soo horjeedo Farmaajo.
war-saxaafadeedka Villada ayaa loogu baaqay qaban qaabiyayaasha in ay ilaaliyaan khataraha uu ku faafi karo xanuunka Covid.
Hoos Ka Akhriso War-Saxaafadeedka Villa Somalia.
Bilowgii, Xukuumaddu waxay u soo jeedisay mucaaradka in ay mudaharaadkooda ku qabsadaan Eng Yariisow Stadiyoom si loo xaqiijin karo habraacyada xakamaynta COVID-19 ee waajibka ah, laakiin markii mucaaradku ku adkaysteen fagaaraha Daljirka Dahsoon xukuumaddu iyada oo tixgelinaysa heshiisyadii la wada gaaray waxay ogolaatay dalabkii mucaaradka.
Ugu dambayn Xukuumaddu waxay fartay qaban qaabiyayaasha mudaharaadku in ay dibad baxayaasha ku adkeeyaan soo qaadashada afxirka iyo kala fogaanshaha.